Biography of Malcolm X - AFRIKHEPRI
ny talata, 9 aprily 2020
Chili, fanalahidy vaovao hiadiana amin'ny ananana
Lehilahy sy ny vatany - Annie Besant (PDF)
Ny misterin'ny Ejipsiana - Alexandre Moret (PDF)
Ny boky mavo N ° 1 (PDF)
Jereo Invictus (2009)
Jereo ny ady tsara indrindra (2000)
Queen Khalifa, empress mainty izay nitondra ny fanjakan'i California talohan'ny taonjato faha-15
Fiandohan'ny teny Afrika
Fivavahana sy parasy
Marcus Garvey: Rain'ny firaisambe afrikanina
Tantaran'ny ankapobeny ao Afrika (Boky 4)
Ny griotic - Toure Aboubakar Cyprien
Ny olombelona no taratry ny eritreriny - James Allen (Audio)
Nanomboka ny fahitana horonantsary Offline any Afrika ny Youtube
Inona ny fahatsiarovan-tena sy ny fivoaran'ny tena manokana?
Ny mahagaga indrindra amin'ny tsiambaratelo - Earl Nightingale (Audio)
ETO IZANY NY TOETRANO ROBOT FOTONDRANA FOTOTRA SY FOTSOTORANAO ARY ATAO NY FANAVOTANA AZY
ANY 2020, HAHAZOANA ETO AN-TANY AMIN'NY TANY AFRIKA ETO AMIN'NY INTERNET
Ny tena fototry ny fahatsapan-tena - Paramahansa Yogananda (Audio)
Misy vahaolana ara-panahy amin'ny zava-manahirana rehetra misy anao - Wayne Dyer (Audio)
Fifandraisana am-pitiavana - Eckhart Tolle (Audio)
Ny herin'ny fahatokisan-tena - Brian Tracy
in AFRIKANANA SY NY FAHAMARINANA
Malik al-Shabazz miteny an'i Malcolm X
Naneho hevitra ianao "Biography of Malcolm X" Sekondra vitsy lasa izay
Malcolm X dia teraka Malcolm Little tamin'ny 19 Mey 1925 tao Omaha, Nebraska. Louise Norton Little, reniny, dia vehivavy mpikarakara be atao ary misy zanaka valo ao amin'ny fianakaviana. Ny rainy, Earl Little, dia pasitera Baptist tsy dia mavitrika ary nanohana ny mpitarika ny nasionalista mainty hoditra, Marcus Garvey. Earl ny fikatrohana sivily dia nanambana fandrahonana ho faty avy amin'ny fikambanana fotsy vatan'ny Black Legion, izay nanery ny fianakaviana hifindra indroa alohan'ny fitsingerenan'ny andro fahefatra an'i Malcolm.
Na kely aza ny zava-bitany tamin'ny ezaka nataony mba handroahana ny legion, tamin'ny 1929, nodorana tamin'ny tany ny tranon'izy ireo tao Lansing, Michigan. Roa taona taty aoriana dia hita ny vatan'i Earl niampita teo amin'ny làlan'ny trolleybus. Namoaka didy ny polisy fa tsy nahy ireo tranga roa ireo fa vitsy kosa ny sasany azo antoka fa tompon'andraikitra ao amin'ny Black Legion. Niharatsy ny fihetseham-po i Louise taona maromaro taorian'ny nahafatesan'ny vadiny ary nanolo-tena tamin'ny rafi-tsaina iray izy. Nizara teo anelanelan'ny trano fitaizana sy kamboty ny zanany.
Malcolm dia mpianatra marani-tsaina ary mifantoka. Nahazo diplaoma tamin'ny ambaratonga faharoa tao amin'ny lohan'ny kilasiny izy. Saingy, raha nisy mpampianatra iray tiana iray nilaza tamin'i Malcolm ny nofinofiny ho lasa mpisolovava dia “tsy misy tanjona kendrena ho an'ny mpanondrana,” very tsy liana i sekoly i Malcolm. Nahafoy tena izy ary nandany fotoana vitsivitsy tany Boston, Massachusetts nanao asa hafahafa isan-karazany, ary avy eo nankany Harlem, New York, izay nahavita heloka bevava. Tamin'ny 1942, i Malcolm dia nandrindra peratra zava-mahadomelina isan-karazany, fivarotan-tena ary lalao.
Farany, Malcolm sy ilay sipany, Malcolm "Shorty" Jarvis dia niverina tany Boston. Tamin'ny 1946, dia nosamborina sy voampanga tamin'ny fiampangana mpangalatra izy ireo, ary i Malcolm dia voasazy higadra 10 taona an-tranomaizina. (Navoaka tamin'ny parole izy taorian'ny nanompoany fito taona.) Ny fahatsiarovana ny androny tany am-pianarana dia nampiasa ny fotoana hanohizana ny fianarany izy. Nandritra io vanim-potoanan'ny fahazavan-tena io dia nitsidika sy niresaka momba ny niovan'ny finoana Silamo ny Rahalahy Reginald farany. Reginald dia anisan'ny fikambanana ara-pivavahana ao amin'ny Nation of Islam (NOI).
Gaga ny tena, nanomboka nianatra ny fampianaran'ny lehiben'ny NOI i Elijah Muhammad i Malcolm. Nampianarin’i Muhammad fa ny fiaraha-monina fotsy dia niasa tamim-pahavitrihana mba hitazomana ny amerikanina afrikanina ary hahatratra fahombiazana ara-politika, ekonomika ary sosialy. Anisan'ireo tanjona hafa, ny AI dia niady ho an'ny fanjakana misy azy manokana, tafasaraka tamin'ny fotsy hoditra. Tamin'ny fotoana namotsorana azy tamin'ny parole tamin'ny 1952, i Malcolm dia mpianatra feno fanoloran-tena miaraka amin'ny anarana vaovao hoe "X" (Tomban'izy ireo ny "andevo" kely ary nifidy ny "X" izy mba hilazana ny anaran'izy ireo very. )
Mpitarika iray teraka
Hendry sy mahay, i Malcolm dia notendrena ho minisitra sy mpitondra tenim-pirenena ho an'ny Firenena Islam. Elia Muhammad no tompon'andraikitra amin'ny fananganana moske vaovao any amin'ireo tanàna toa an'i Detroit, Michigan ary Harlem, New York. Malcolm dia niasa andry gazety, radio ary fahitalavitra mba hampielezana ny hafatr'i NOI manerana an'i Etazonia. Nahasarika olona maro vaovao ny herim-panahiny, ny dinamisma ary ny fahareseny. Malcolm dia nohamafisin'ny fitomboan'ny maha-mpikambana an'i IA tamin'ny 500 tamin'ny 1952 ka hatramin'ny 30.000 tamin'ny 1963.
Ny vahoaka sy ny resabe manodidina an'i Malcolm dia nahatonga azy hanao plangy media. Naseho tamina dokambarotra manokana tamin'ny fahitalavitra niaraka tamin'i Mike Wallace izy tamin'ny 1959, mitondra ny lohateny hoe "Hate That Hate Produces." Ny fandaharam-potoana dia manadihady ny fototra niorenan'ny NOI, ary nanaraka ny fisian'i Malcolm ho iray amin'ireo mpitarika manana ny lanjany indrindra. Taorian'ny zava-dehibe, i Malcolm dia niatrika ny zava-misy tsy dia zotom-pinoana fa ny lazany dia nanaloka ny lazan'ny an'i Elia Muhammad mpanoro hevitra azy.
Niharatsy ny fifanolanana teo amin'ny foko nandritra ny taona 1960. Ankoatra ny haino aman-jery, ny toetrany malcolm dia nahasarika ny saina ny governemanta. Raha nanohy nitombo ny mpikambana tao amin'ny NOI dia namoaka ny fandaminana ny orinasam-pifandraisana FBI (nitovy tamin'ny mpiambina an'i Malcolm) sy nametraka kitapo, wiretaps, fakan-tsary sy fitaovana hafa fanaraha-maso mba hanaraha-maso ny asan'ny vondrona. .
Malcolm Faith dia voadona mafy tokoa teo amin'ny haavon'ny hetsika sivily sivily tamin'ny 1963. Nianatra izy fa ny mpanolo-tsaina sy mpitarika azy, Elias Muhammad, dia nanao firaisana mangingina tamin'ny vehivavy enina toy izany tamin'ny enina Fikambanan'ny Firenena Silamo. Tahaka ny tsy ampy dia hitan'i Malcolm fa nisy ny fifandraisan'ny sasany tamin'ireo ankizy ireo.
Hatramin'ny nahatongavany tao NOI dia nanaraka mafy ny fampianaran'i Muhammad i Malcolm - izay nahitana fa mijanona ho olon-tokana mandra-panambadiany an'i Betty Shabazz tamin'ny 1958. Nolavin'i Malcolm ny fangatahan'i Mahomet hanampy amin'ny famelana ireo raharaha sy ankizy manaraka ireto. Tena naratra mafy izy noho ny fahadisoam-panantenan'i Muhammad, izay noheveriny ho mpaminany velona. Malcolm koa dia nahatsiaro tena ho meloka momba ny vahoaka izay nitondrany niditra ny NOI, izay tsapany ankehitriny dia fikambanana hosoka namboarina ho an'ny maro ka tsy raharahany intsony.
Fotoana fohy taorian'ny nahitany ny nahagaga azy, nahazo fanakianana i Malcolm noho ny fanehoan-kevitra nataony momba ny namonoana ny filoha John F. Kennedy. "Tsy nanantena i [Kennedy] fa hitodika amin'izy ireo tsy ho ela ny akoho", hoy i Malcolm. Taorian'ity fanambarana ity dia «nampangina 'an'i Malcolm i Elijah Muhammad nandritra ny 90 andro. Malcolm, kosa, no niahiahy tamina fahanginana noho ny antony hafa. Tamin'ny martsa 1964 dia namarana ny fifandraisany tamin'ny NOI i Malcolm. Tsy azo atao ny mijery lavitra ny fitaka Muhammad, nanapa-kevitra i Malcolm fa hahita ny fivavahany manokana, ny Mosquio Mosque, Inc.
Tamin'io taona io ihany i Malcolm dia nanao dia fivahinianana tany Mecca, Arabia Saodita. Ny dia nivadika ho fanovana fiainana. Sambany nozarain'i Malcolm ny eritreriny sy ny finoany avy amin'ny kolontsaina samihafa, ary nahita ny valiny dia tena tsara. Rehefa tafaverina izy dia nilaza i Malcolm fa nihaona tamin'ny "volo blond," eo imason'ny lehilahy manga izay azoko antsoina ny rahalahiko. " Niverina tany Etazonia izy niaraka tamin'ny fomba fijery vaovao momba ny fampidirana sy ny fanantenana vaovao amin'ny ho avy. Tamin'ity indray mitoraka ity fa tamin'ny Malcolm niteny, fa tsy nitory tamin'ireo Amerikanina amerikana fotsiny dia nahazo hafatra ho an'ny hazakazaka rehetra izy.
Taorian'ny nialan'i Malcolm tamin'ny toerany ho an'ny Firenena Islam ary nanala an'i Elia Muhammad dia nanjary niharatsy ny fifandraisan'izy roalahy. Nampitandrina ireo tompon'andraikitra ao amin'ny FBI izay miasa amina tsiambaratelo ao amin'ny NOI fa i Malcolm dia voamariky ny famonoana azy. (Nisy manampahefana iray miafina fa voaheloka hanampy amin'ny fametrahana baomba ao amin'ny fiaran'ny Malcolm).
Taorian'ny fikandrana miverimberina teo amin'ny fiainany, dia zara raha nandeha i Malcolm na aiza na aiza, tsy nisy mpiaro. Ny 14 February 1965, ny tranon'ilay Malcolm, Betty sy ny zanany vavy efatra nipetraka tany East Elmhurst, dia nodorana i New York. Soa ihany fa nandositra ny vatana ny fianakaviana.
Ny lova na "X"
Ny herinandro taty aoriana anefa, ny fahavalon'i Malcolm dia nahomby tamin'ny ezaka feno habibiana. Nandritra ny kabary iray tao amin'ny Ballroom Audubon Manhattan tamin'ny 21 febroary, nisy basy telo nirongo basim-borona tamin'ny sehatra 1965 Malcolm. Tifitifitra in-15 azy ireo izy ireo. Ny 39 taona dia voalaza fa maty rehefa tonga tany amin'ny Hopitaly any Columbia, New York Presbyterian.
Olona dimy ambin'ny folo no nanatrika ny fandevenana an'i Malcolm tany Harlem ny 27 febroary 1965, tao amin'ny Temple of the Faith of God in Christ Church (izao hoe Fiangonan'ny Zanaky ny Fahatsiarovana an'Andriamanitra ao amin'i Kristy). Taorian'ny lanonana dia nesorin'ireo sakaiza ireo saribakoly teo amin'ny fandroana niandry ary nalevin'i Malcolm ny tenany.
Taty aoriana tamin'io taona io, i Betty dia niteraka ny zanak'izy roa vavy.
Mpamono olona Malcolm, Talmadge Hayer, Norman 3X Butler ary Thomas 15X Johnson dia voaheloka ho namono olona voalohany tamin'ny volana martsa 1966. Ireo lehilahy telo ireo dia samy mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana Islam.
Ny lova navelan'i Malcolm X dia nivoatra tato anatin'ny taranaka ho zon'ny tsikombakomba amin'ny boky sy boky maro. Nipoitra indray ny fahalianana be tamin'ny taona 1992 rehefa namoaka ny sarimihetsika malaza, Malcolm X ny talen'ny Spike Lee. Nahazo ny fanendrena an'i Oscar ho mpilalao sarimihetsika tsara indrindra (Denzel Washington) sy ilay akanjo tsara indrindra. Malcolm X dia nalevina tao amin'ny fonjan'i Ferncliff tao Hartsdale, New York.